गर्भाधान | Ratopati
ढिलो गर्भाधान : ३० वर्षपछि आमा बन्दा ध्यान दिनुपर्ने ५ कुराहरु access_timeमंसिर १६, २०७८
पछिल्लो समय ३० वर्षको उमेर वरिपरि आमा बन्ने महिलाको संख्या धेरै पाइन्छ । विभिन्न कारणले ढिलो बच्चा जन्माउने क्रम बढ्दै गएको छ । कुन उमेरमा आमा बन्ने भन्ने अधिकार महिलामा हुन्छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार ३५ वर्षपछि गर्भधान गर्ने योजना गर्ने महिलाहरुले विभिन्न समस्याको सामन...
गर्भाधान भइरहेको छैन ? कतै थाइरोइड त होइन कारण ? access_timeपुस २८, २०७७
एजेन्सी – धेरै महिलाहरुमा थाइरोइडका कारण गर्भ नबस्ने समस्या देखिन्छ । त्यसैले गर्भाधान गर्नुअघि थाइरोइडको उपचार गर्नुपर्छ । थाइरोइड महत्त्वपूर्ण फर्टिलिटी ग्रन्थी हो । र यस ग्रन्थीमा हुने गडबढका कारण सन्तान जन्माउने क्षमतामा ह्रास आउँछ । थाइरोइड ग्रन्थीले राम्रोसँग...